Xawaaraha Hump, Cable-ka Ilaaliyaha, Pvc Cone Traffic - YONGSHENG
Waddada Curb Ramp
Jidka loo yaqaan 'Heavy Duty Curb Ramp'
Barafka hore ee kursi-wheelka
Kabbaarka Doomaha Rabadhka
Dusha-xidhka Leveler Bumper
Dock Bamper Laminated
Carrada Baarkinka Birta
Tiantai Yongsheng Traffic Facilities Co., Ltd. waa soo saaraha tas-hiilaadka taraafikada oo leh tas-hiilaad si wanaagsan u qalabaysan iyo awood farsamo oo xoog leh, oo ku takhasustay Soo saarista iyo Suuqgeynta Agabka caag ah ee Cable Protector, Badbaadada Bakhaarka, Badbaadada baarkinka iyo ramp.
Iyada oo leh tiro balaadhan, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo nashqadaha casriga ah, alaabadayada waxaa si weyn looga isticmaalaa warshadaha iyo warshadaha kale. Badeecadahayaga si weyn ayaa loo aqoonsan yahay oo lagu kalsoon yahay isticmaalayaashu waxayna dabooli karaan isbeddel joogto ah oo dhaqaale iyo baahi bulsho.
Chock-ka weyn ee caagga jaalaha ah ee gaariga xamuulka
6 Ft Xawaaraha Rabadhka Humps oo leh Interlocki Modular...
Taxanaha Kursiga Curyaanka ee Ramp-TRA
Waddada Baabuurka Curb Ramp-TRC08
Koodhka taraafikada ee PVC
Meesha Kursiga Curyaanka ee Caag ah
Barafka Jidka Ramp Curb Ramps
Jidka jidka loo maro marinka kursiga curyaanka
Waxaa naloo soo saaray in ka badan 200+ badeecooyin oo waafaqsan MUTCD, ASTM, AS/NZS iyo CE Standard. Waxa aanu nahay shirkad ay ka go'an tahay in ay dhisto iskaashi wakhti dheer ah macaamiisheena adduunka oo dhan. Hadafkayagu waa inaan noqono ishaada koowaad ee dhammaan noocyada kala duwan ee Ilaaliyaha Cable, Badbaadada Bakhaarka, badbaadada baarkinka iyo socodka.
Miyay xawligu ku dhufteen ee waligeed la arki karo...
Meelaynta iyo shaqada joogsiga wheel...
Sida loola tacaalo cayrinta "killer...
NO.13, HONGSAN AVENUE,HONGCHOU TOWN, TIANTAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, SHIINAHA